၂၀၁၄ အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
(၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
VII Para Games
Friendship, Equality and Unity
၂၀၁၄ အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ နေပြည်တော်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်မှ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသော သတ္တမအကြိမ်မြောက် အာဆီယံ မသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ နေပြည်တော်ဆီးဂိမ်းပြီးနောက် ၃ ပတ်အကြာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားပြီးလျှင် ဆဌမမြောက်အိမ်ရှင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှ အားကစားသမား ၁၄၈၂ ဦးက အားကစားနည်း ၁၂ မျိုးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနှင့် မလေးရှားတို့မှ ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယရရှိကာ အိမ်ရှင်မြန်မာမှာ ပဉ္စမရရှိခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တွင် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ကျင်းပခွင့်ရပြီးနောက် ၇ ကြိမ်မြောက် မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပါ အလိုအလျောက် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော် အာဆီယံပါရာဂိမ်း ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၂၀၁၄ အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲကို နေပြည်တော်ရှိနေရာ ၇ နေရာတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
မြို့ အားကစားကွင်း အားကစားနည်းများ
ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိအားကစားကွင်း ဖွင့်ပွဲ၊ ပိတ်ပွဲ၊ ပြေးခုန်ပစ် (လမ်းကြောင်းပြေး)
မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ ဘောစီးယား၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ထိုင်ဘော်လီဘော၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် ဘတ်စကတ်ဘော၊ ဂိုးဘော
၂၀၁၄ အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်သည် မြန်မာပြည်မြေပုံကို တက်ကြွနေသော အားကစားသမားတစ်ယောက်အသွင် ဖော်ပြထားသည်။ အဝါ၊ အစိမ်း နှင့်အနီရောင်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံမှ အမျိုးသားအရောင်များအား ကိုယ်စားပြု ထားသည်။ အဝါရောင်စက်ဝန်းသည် တူညီခြင်းနှင့် ညီအစ်ကို အရင်းအခြာဖြစ်ခြင်းကို ရည်ညွန်းသည်။ အစိမ်းရောင်မှာ သဘာဝအလှတရားများကို မြတ်နိုးခြင်းနှင့် စိမ်းလန်းစီးပွားစနစ်တို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အနီရောင်မှာ မြန်မာတို့၏ ရဲရင့်ခြင်းနှင့် ကြိုးစားခြင်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လက်ထိပ်တွင် အာဆီယံပါရာဂိမ်းအဖွဲ့ချုပ်အလံကို တပ်ဆင်ထားခြင်းသည် ၇ ကြိမ်မြောက်ပါရာဂိမ်းကို အောင်မြင်စွာလက်ခံကျင်းပခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
လာဘ်ကောင်သည် ဇီးကွက်ဖြစ်ကာ အမည်မှာ ကိုဇီးကွက်ဖြစ်သည်။ ဇီးကွက် ရုပ်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အသိဉာဏ်ကြီးခြင်း ၊ တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့် မျှတခြင်း ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်နှင့် လျှော်ညီသည်ဟု ကမ္ဘာမှ ယူဆထားသကဲ့သို့ မြန်မာမှလည်း မင်္ဂလာရှိခြင်းနှင့် ကံကောင်းခြင်းများကို ယူဆောင်လာသည်ဟု ယူဆကြသည်။ 
အဓိက သီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာ ပါရာဂိမ်းနှင့်အားလုံးကိုဆိုလိုပါသည် တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ၁၄ရက်နေ့ညနေ ၅:၃၀တွင် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားကွင်း၌ အစီအစဉ် ၁၅ ခုဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲမစတင်မီ တေးသံရှင်မျာက သီဆိုခဲ့ကြသည်။ ညနေ ၆ နာရီတွင် သမ္မတနှင့် ဇနီးရောက်ရှိလာပြီး ကျောင်းသားလေးများ၏ အမှတ်စဉ်ရေတွက်မှုဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကြည့်မြင့်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်းမှ အနုပညာရှင်များ၏ ဆိုင်းဝိုင်း၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဆိုကရေးတီးပြိုင်ပွဲများ၌ ရွေတံဆိပ်ဆုရှင် အမျိုးသမီးငယ်များ၏ ဆိုင်းဝိုင်း၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်( ရန်ကုန်)မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ တယောတူရိယာတီးခတ်မှုတို့ဖြင့် ဂါရဝပြု တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အားကစားသမားများ ချီတက်အပြီး ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းမှ အားကစားပွဲတော် ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ မီးရှုးတိုင်ထွန်းညှိရာတွင် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားဟောင်း ၉ ဦးမှ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ပြီးနောက် လှံတံပစ်အားကစားသမားဦးကျော်ခိုင်မှ လှံတံပစ်၍ မီးထွန်းညှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် မသန်းစွမ်းကလေးများအပါအဝင် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့များမှ ဖျော်ဖြေရေးများဖြင့် တင်ဆက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ ပိတ်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ အားကစားကွင်း၌ အစီအစဉ် ၁၀ ခုဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ပိတ်ပွဲစတင်ပြီး သီချင်း ၃ ပုဒ်၊ ဖျော်ဖြေရေး ၃ ခုဖြင့်တင်ဆက်ခဲ့ပြီး အစီအစဉ်များကို အစီအစဉ်အလိုက် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းမှ ပွဲတော်ကို ပိတ်သိမ်းကြောင်း ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅စင်ကာပူပွဲတော် ကျင်းပမည့် စင်ကာပူနိုင်ငံကို အားကစားရေးရာများ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၃ဆီးဂိမ်း ပိတ်ပွဲတွင် တင်ဆက်ခဲ့သော ပြန်ဆုံမယ်အစီအစဉ်ကို တေးသံရှင်များနှင့် ကလေးများက သီဆိုကာ ည ၉:၃၀ တွင် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနား ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ဘဏ္ဍရေးအခြေအနေကြောင့် အရှေ့တီမောနိုင်ငံမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။
2014 ASEAN Para Games medal table
၁ အင်ဒိုနီးရှား ၉၉ ၆၉ ၄၉ ၂၁၇
၂ ထိုင်း ၉၆ ၈၂ ၇၀ ၂၄၈
၃ မလေးရှား ၅၀ ၄၉ ၄၁ ၁၄၀
၄ ဗီယက်နမ် ၄၈ ၆၅ ၇၂ ၁၈၅
၅ မြန်မာ* ၃၄ ၂၆ ၃၆ ၉၆
၆ ဖိလစ်ပိုင် ၂၀ ၁၉ ၂၁ ၆၀
၇ စင်ကာပူ ၇ ၁၀ ၁၀ ၂၇
၈ ကမ္ဘောဒီးယား ၃ ၄ ၂ ၉
၉ ဘရူနိုင်း ၂ ၃ ၇ ၁၂
၁၀ လာအို ၀ ၃ ၃ ၆
၂၀၁၃ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ
↑ Philippine wheelchair cage team bags bronze in ASEAN Para Games
↑ 16.Jan 14_nlm | Ennahda Movement | Zine El Abidine Ben Ali
↑ ASEAN Para Games - Zimbio
↑ 18.Jan 14_nlm | Nuclear Program Of Iran | Viktor Yanukovych
↑ Malaysian blind football team clinches silver at Asian Paragames - Community | The Star Online
↑ Asean Para Games: Nurulasyiqah lands boccia gold, swimmer Goh makes it3on the trot, Sport News & Top Stories - The Straits Times
↑ 20.Jan 14_nlm | Bashar Al Assad | Intel
↑ Logo Archived 18 January 2014 at the Wayback Machine.
↑ Mascots Archived 18 January 2014 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၄_အာဆီယံမသန်စွမ်း_အားကစားပြိုင်ပွဲ&oldid=422437" မှ ရယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲများ
မြန်မာ အားကစား ဆောင်းပါးတိုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၇:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။